Dabeylaha xagaaga: maxay yihiin, sidee u sameystaan ​​iyo qatar | Saadaasha Shabakadda
Xaqiiqdii weligaa waad noolayd kuwa xoogga badan dabeylaha xagaaga. Waana in xilliyada qaarkood ee sanadka, xaaladaha deegaanka ay u badan tahay inay abuuraan duufaanno rabshad wata. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadlaynaa duufaannada xagaaga iyo samaysankooda.
Haddii aad rabto inaad ogaato sida dabeylaha xagaaga loo sameeyo iyo waxa cawaaqibyadoodu yihiin, kani waa boostadaada.
1 Dabaylaha xagaaga
2 Sidee duufaanta xagaaga u samaysmaan
3 Sida loo ogaado haddii duufaanku dhowdahay
4 Khataraha duufaanka
Marka xagaagu ku dhow yahay geeska, heerkulku wuxuu bilaabmaa inuu kaco. Iyadoo tan, sidoo kale qadarka hawada sare u kacaya. Yaanan iloobin in dhaqdhaqaaqa jawigu si uun u shaqeeyo. Hawada kulul waa ka cufan tahay, sidaas darteed waxay u eg tahay inay ku kacdo joog sare. Markaad gaarto meelaha sare, waxaad lakulmaysaa lakab kale oo hawo qabow. Haddii aan eegno muuqaalka kuleylka ee jawiga hoose waxaan aragnaa in heerkulku hoos u dhacayo markii aan kordhinayno dhererka. Marka haddii hawo kulul ay la kulanto hawo qabow marka ay gaadho meelaha dhaadheer, waxay bilaabaysaa inay isku uruursato.
Heerka uumida hawadu waxay kuxirantahay heerkulka uu gaarayo dhererka la tilmaamay iyo heerkulka jira ee lakabkaas hawada ah. Haddii heerka uumiga ee hawadu uu yahay mid adag oo xaaladaha deegaanku ahaadaan kuwo xasilloon, daruuraha roobabku waxay sameysmayaan oo sameyn kara dabeylo dhab ah oo xoog leh.
Maalmaha xagaaga badanaa waa qorax iyo kulayl. Si kastaba ha noqotee, maalmaha qaarkood, xitaa haddii maalintu u soo baxdo qorax, cirku wuxuu bilaabaa inuu madoobaado oo wuxuu ku dhammaadaa duufaan. Waa kuleylka sare ee soo saara noocyada duufaannada. Aynu aragno waxa hawshu u samaysan karto duufaannada xagaaga.
Sidee duufaanta xagaaga u samaysmaan
Waxa ugu horreeya oo dhan waa in la falanqeeyo waxa ay yihiin xaaladaha bilowga ah ee deegaanku. Waxaan ku bilaabeynaa maalin leh heerkul sarre iyo qorrax kululeyneysa deegaanka. Sida deegaanku u kululaado, ayaa sidoo kale hareeraha hareeraheeda. Markay hawadu kululaato heerkulkeeduna kor u kaco, waxay u janjeeraa inay kor u kacdo maxaa yeelay way fududahay oo waxay kusii fideysaa cadaadiska. Uumigan kulul ee kor ugu kacay heerarka sare wuxuu la xiriiraa hawo qabow. Isweydaarsigan heerkulku wuxuu keenaa inay dhahaan kuleyl si isku mid ah ugu darmo dhibco biyo si deg deg ah Farqiga u dhexeeya kuleylka iyo qabowga ayaa sababa inuu ka soo bilowdo dabeylo taas badiyaa waxay soconayaan ilaa saacad.
Dhibaatada noocyadan duufaannada ah waa xoogga ay roobabku ku da'aan. Maaddaama tiro badan oo uumiga biyuhu isku ururayo oo noqonayaan dhibco sameeya daruuro roob xawaare sare ku socda, waxaa ku soo kici kara ficilka culeyska. Ha iloobin taas maxaa loogu talagalay dhibco biyo ayaa ku samaysan kara joogga sare, uumiga uumiga hygroscopic ayaa loo baahan yahay. Nuclei-yadaas uumiga ahi waa wax aan ka badnayn jajabyada deegaanka ee sabeynaya isla markaana u ah xudun u ah dhibcaha biyaha lagu keydiyo hareerahooda.
Marka dhibcaha biyaha ay gaaraan culeys durba iska caabin kara waxqabadka culeyska, waxay ku dhacaan qaab roob ah. Duufaannada xagaaga badanaa waa kuwo aad u daran laakiin waxay soconayaan hal saac. Waqtigaani waa waqtiga ay qaadato in daruuraha roobka ee la sameeyay ay ku baaba'aan falka hawadan kacaysa awgeed. Markay duufaantu dhacdo, waxay sii wadaa inay dib u quudiso qaddar badan oo hawo kulul oo kacda oo la kulanto hawo kale oo heer kulkeedu hooseeyo.
Sida loo ogaado haddii duufaanku dhowdahay
Waa wax caadi ah duufaanta xagaaga inay ka yaabiso dadka maxaa yeelay waxay u dhacaan si deg deg ah oo lama filaan ah. Hillaaca biriqdu wuxuu ina siin karaa tilmaan haddii duufaanku dhow yahay iyo in kale. Waxay sidoo kale na siin kartaa tilmaan kale oo ku saabsan haddii waxa ina soo dhowaanaya iyo in kale ay yihiin duufaanno xagaaga. Waxaa jira qaacido fudud oo fudud oo naga caawin karta inaan wax walba ka barano duufaantaan.
Qaaciddadaani waxay ka kooban tahay fiirinta hillaaca iyo xisaabinta muddada ay qaadanayso ilaa dhulka laga maqlayo. Hillaac ayaa la arkaa isla xilliga la soo saaro. Hase yeeshee, onkod waxay ku socon doontaa xawaaraha codka. Xawaarahani waa 340 mitir ilbiriqsikiiba. Sidaa darteed, waxay kuxirantahay masaafada ay duufaantu inaga jirto, waxay qaadan doontaa in kabadan ama kayar inlaguxaro dhulkaas. Hal kiilomitir oo masaafo ah ayaa loo tarjumay ugu yaraan 3 ilbidhiqsi. Iyada oo ku xidhan inta ay qaadatay in la dhawaaqo, waxaan saadaalin karnaa halka ay ku sugan yihiin dabeylaha xagaaga.
Haddii ilaa 3 ilbidhiqsi ay ka soo wareegto markii aannu aragnay hillaac ilaa uu onkodku dhawaaqayey waxaan ogaan karnaa in duufaanku uu hal kiilo mitir u jiro. Hadday 6 ilbidhiqsi dhaafto, waxay noqonaysaa laba kiiloo mitir. Tani waa sida, si isdaba-joog ah, aan u saadaalin karno halka duufaanku ku sugan yahay waqtigaas. Waad ku mahadsan tahay xisaabtan noocan ah, waxaan u carari karnaa si aan u aragno duufaantaan intaanay na soo gaadhin.
Sidii aan horey u soo sheegnayba, in kasta oo duufaanta xagaaga ay sida caadiga ah waqti aad u gaaban soconayaan, waxay u muuqdaan kuwo qatar badan leh. Khatartani waxay ugu wacan tahay xoogga ay ku dhacayaan. Waxaan soo qaadaneynaa tusaale inta badan dhaca inta badan maalmaha xagaaga. Waxaan nahay waxa ugu horeeya subaxa waxaanna kor uqaadnaa indhoolayaasha iyagoo arkaya inay tahay qorrax dhalaalaya iyo kuleyl nagu dhiiri gelinaya inaan ku qubeysano barkadda. Si kastaba ha noqotee, Kuleylkaan daran wuxuu sababi karaa duufaan maalintii oo dhan.
Dhibaatadu waxay tahay, mararka qaarkood, waxaa badanaa la socda duufaanno culus. Waa roobdhagaxyaalaha oo sababa waxyeelo culus oo maadiga ah. Samaynta barafka waxaa keena uumiga oo si dhakhso leh u dhaca. Barafkan oo sababi kara waxyeelo maadadeed iyo beero, wixii ka sarreeya oo dhan.
Duufaannada xagaaga sidoo kale badiyaa waxaa la socda duufaanno. Waxay yihiin hillaac hillaac ah oo si joogto ah u iftiimiya cirka, sidaa darteedna, waxaa lagula talinayaa inaadan magan gelin geedaha ama aysan la xiriirin walxaha birta ah. Qalabka iyo aaladda elektiroonigga ah ee ay ku xirtay korontada waa in laga xiraa maadaama ay waxyeelo u geysan karaan duufaanadan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto duufaanada xagaaga iyo sida ay u dhacaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Dabaylaha xagaaga